WARBIXIN: 4 Kooxood Oo Horyaalka Serie A-da Isku Baacsanaya Labada Boos Ee Loogu Soo Boxo Champions League. – Wararka Ciyaaraha Maanta
May 20, 2019 kooxda Serie A, Wararka Maanta, Warbixino 0
Natiijooyinkii kulankii hal kulan ka dambeeyay xilli ciyaareedka Serie A-da ayaa keenay in ay 4 kooxood ku tartamaan 2 boos oo kaliya oo ah kuwa loogu soo baxayo champions League xilli ciyaareedka dambe.
Kaliya kooxda ku guulaystay horyaalka ee Juventus iyo Kooxda Napoli oo kaalinta 2-aad ku jirta ayaa haatan xaqiiqsaday booskooda champions League xilli ciyaareedka dambe.
Kooxaha Atalanta, Inter, Milan & Rom ayaa ku tartamaya labada boos ee kale ee loogu soo baxayo champions League xilli ciyaareedka dambe.
Atalanta (3-aad) 66 Dhibcood.
Kooxda Atalanta ayaa gacanta ku haysata rajadeeda iyo waliba in ay u soo baxaan champions League markii ugu horaysay taariikhooda iyada oo guul ay ka gaadhaan kooxda Sassuolo ay kaga filantahay in ay boos ka samaysato champions League xilli ciyaareedka dambe halka ay xitaa bar-baro ay gasho rajo fiican siinayso laakiin waxa ay u baahantahay in ay natiijooyinka 3-da kooxood ee kale dhankooda u bataan hadii ay bar-baro gasho.
Inter (4-aad) 66 Dhibcood:
Guuldaradii 4/1 ahayd ee ka soo gaadhay Napoli ayaa dhirbaaxo ku noqotay fursadaha kooxda Inter Milan ee champions League, Inter ayaa todobaadka dambe San Siro kula ciyaari doonta kooxda ka hadhay horyaalka ee Empoli iyaga oo og in guul ay gaadhaan kaga filantahay in ay u soo baxaan champions League iyaga oo aan sugin natiijooyinka kooxaha kale.
Milan (5-aad) 65 DhibcoodL
Inkasta oo ay guul ka gaadheen kooxda Frosinone todobaadkan hadana Milan ayaa u baahan in ay kooxaha kale siibtaan si ay ugu soo baxaan champions League xilli ciyaareedka dambe.
Ac Milan ayaa la ciyaari doonta kooxda SPAL waxana ay u baahan yihiin guul iyo waliba in laga badiyo midkood kooxaha Atalanta ama Inter Milan si ay ugu soo baxaan champions League xilli ciyaareedka dambe.
AS Roma (6-aad) 63 Dhibcood:
Bar-Barihii ay la gashay kooxda Sassuolo ayaa xumeeyay rajada Roma ee ka soo qayb galka champions League laakiin waxa ay wali leedahay rajo ay ugu soo baxdo iyaga oo u baahan in ay guul ka gaadhaan kooxda Parma waliba in ay rajeeyaan in ay kufaan dhamaan kooxaha ka horeeya ee Atalanta, Ac Milan iyo Inter Milan si ay ugu soo baxaan champions League xilli ciyaareedka dambe.
Laakiin marka si loo eego uma badna in ay kooxda Roma xilli ciyaareedka dambe ka qayb gali doonto tartanka champions League xilli ciyaareedka dambe.